साढे २ लाख पासपोर्ट हरायो - आर्थिक - Radio Kantipur
- किरण अधिकारी, काठमाडौं
अनधिकृत रुपमा पासपोर्ट संकलन गरेको र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर लाखौ रुपैयाँ ठगी गर्ने म्यानपावर नै भएको खुलासा भएको छ । तर सो क्षेत्रमा सम्लग्न भएर ठगिएका सर्वसाधारण प्रष्ट समस्या नखुलाउँदा एकिन ठम्याई हुन नसकेको पासपोर्ट विभागले जनाएको छ ।
कैलालीका आशिष कोइरालाले म्यानपावरले गर्दा नयाँ पासपोर्ट बनाउनुपरेको दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो –“ म दुबई जानका लागि म्यानपावरलाई पासपोर्ट दिएँ, मलाई कामको चित्त नबुझेपछि पासपोर्ट फिर्ता मागे । तर म्यानपावरले त्यो कामका लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्न थाल्यो । पासपोर्ट सहजै नदिने संकेत देखेपछि मैले नयाँ पासपोर्ट बनाउन बाध्य भएँ ।” कोइरालासँगै सिन्धुलीका दुर्गा बस्नेतले पनि म्यानपावरमा बुझाएको पासपोर्ट फिर्ता नपाउँदा उस्तै शास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो । –“ पासपोर्ट चाँहि तपाईले छोडेर जानुपर्‍यो भन्न थाले । यिनीहरुकै भरमा विदेश जाने भनेपछि ल ठिकै छ विदेश जाने नै भएपछि किन नछाड्नु भनेर पासपोर्ट छोडिहालेँ । धेरै समय पनि पासपोर्ट नआउँदा, के कसो भएको रैछ भनेर सोधखोज गरेको यताबाट नि नपठाउने, उताबाट नि बोलावट नआउने, २ महिनाभन्दा बढी भयो । अब विदेश नै जान्न भनेर पासपोर्ट फिर्ता मागेको तर यिनीहरु दिँदैनन् । कहिले के, कहिले के बहानामा झुलाइरहेको छ ।”
म्यानपावरकै लापरवाहीका कारण पासपोर्ट हराएर नयाँ बनाउन बाध्य यी पीडितलाई उदाहरण मान्ने हो भने झण्डै साढे २ लाख सर्वसाधारणको पीडा अनुमान लगाउन सकिन्छ । हराएका पासपोर्टको दुरुपयोग रोक्न सरकारले प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठन ‘इन्टरपोल’ मार्फत जानकारी गराउदै आएको छ । राहदानी हराउने २४ हजार ३ सय ३ जनाले विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट एमआरपी लिएका छन् । काडमाठौंस्थित राहदानी विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी तिर्थराज अर्याल भन्नुहुन्छ, “ अरुको राहदानी कसैले लिएर राख्न नपाउने, हराउनेहरुले भनेको अवस्थामा प्रकृयाअनुसार फिर्ता लिन भन्छौँ, म्यानपावरले दिएन भन्नेलाई पनि प्रकृयाअनुसार फिर्ता दिन भन्छौं, राहदानी पाइन, म्यानपावरले दिएन भन्ने खालका समस्याहरु खुलेरै भन्नेको संख्या निकै कम छ , त्यसैले पनि हामीलाई यस विषयमा अघि बढ्न कठिन भएको हो । समस्या त खुलस्त भन्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ आउने अधिकांशले वास्तविक समस्या नलुकाई , हराएको हो वा म्यानपावरले नदिएको हो भन्ने खुलस्त भने हामीले प्रक्रियागत रुपमा कारबाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गरेपनि रकममा भने भारी बृद्धि गरेको छ । सन् २०१० देखि गत अप्रिलसम्म ४ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पासपोर्ट बनाउन सर्वसाधारणले खर्चेका छन् । यतीका संख्यामा पासपोर्ट हराएको बारे प्रशासन जानकार छ र लुट्ने व्यक्ति वा संस्थाबारे अनभिज्ञ पनि छैन तर कारवाही गर्न भने वेवास्था भईरहेको प्रष्ट छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि जानकार सुशील ढुंगानले म्यानपावरमा अड्किएका पासपार्टका लागि श्रम मन्त्रालयले कडा व्यवहार देखाउनुपर्ने सुझाउनुहुन्छ, “ किन हरायो भन्ने खोजी गर्ने निकाय छैन, कारण पत्ता लगाइएको छैन । पासपोर्ट कसको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । पासपोर्ट कसको हो त? बैदेशिक रोजागारमा जान खोज्नेको हो कि? अरु प्रयोजनका लागिजान खोज्नेको हो कि? अब यो केसमा पासपोर्ट हराएको हैन भने त स्पष्ट छ, पासपोर्ट कि वैदेशिक रोजगार संस्था कि त एजेन्टको खल्तीमा हुन्छ । यी दुई भन्दा अन्त जानु पर्दैन । ”
हस्तलिखित र मेसिन रिडेवल दुवै पासर्पोट हराएका छन् । सरकारले सावधानीका अनेकन उपाय अपनाएपनि फटाई गर्नेहरु जहिल्यै एक कदम अगाडि हुने गरेको पाईन्छ त्यसैले सुरक्षित राहदानी सहित हतकडी लगाउन सम्बन्धित निकाय कठोर बने, सुनमा सुगन्ध हुने थियो कि ।